Vagari Vakawanda kuMasvingo Voramba Kutambira Bhajeti reGuta Ravo
Vamwe vakawanda vemudhorobha reMasvingo vari kuramba kutambira bhajeti regore rinouya rakaparurwa nekanzuru yavo ichiti inoda kukwidza mari yemitero nezvikamu zvinosvika mazana masere kubva muzana.
Kanzuru yeMasvingo yapeta neChipiri misangano yekunzwa pfungwa dzevagari pamusoro pebhajeti regore rinouya iro iri kuda kukwikwidza kusvika pamadhora anodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi maviri nematatu emadhora, kana kuti 723 million RTGs.
Asi mumwe mugari wemumusha weMucheke, Amai Sungano Zvarebwanashe, vati zvikamu zvakakwidzwa zvemitero yemvura, nekutakura marara nezvimwewo zvakawandisa nekudaro veruzhinji havakwanisi kubhadhara mari idzi.
Mumwe mugari wemumusha wekwaMajanhe, VaAlfred Gumbo,vati vane zvikwereti zvemvura sezvo vari kukundikana kubhadra gore rino nekuti vakakanganiswa mabasa avo nedenda re Covid-19 uye kuoma kwehufumi hwenyika.
Kanzuru inoti inoda kukwidza mitero nezvikamu izvi nekuti mari yemunyika iri kugara ichipera simba nekudaro vari kuitira kuti vasare vane mari inozokwana kuita mabasa avo, sekutenga mishonga yekuchenesa mvura inomwiwa muguta nezvimwe zvakawanda.
Vakafanobata chigaro chemunyori weguta reMasvingo, VaEdward Mukaratirwa,vati kanzuru ichakwidza mitero iyi muzvidimbu kuitira kuti vagari vasaomerwe.
VaMukatirwa vati kanzuru ichatanga nezvikamu makumi mashanu kubva muzana muna Ndira gore rinouya, yozokiwdza nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana panopera mwedzi mitatu yoga yoga kusvika gore rapera.
Asi muna Ndira vanenge vobhadhara mari inodarikazviuru zviviri zvemadhora ema RTGS, uye panozopera gore vanenge aobhara mari inosvika zviuru zvisere zvemadhora eRTGS pamwedzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rimomirira vagari reMasvingo United Residents and Rate Payers Alliance, Muzvare Rumbidzai Magurupira, vati mari iri mubhajeti yakawandisa zvokuti vagari vachapedzisira vaita zvikwereti zvavanotadza kubhadhara, nekudaro zviri nani kuti kanzuru idzikise zvikamu izvi.
Muzvare Magurupira vati sangano ravo ranga richipindamumisangano yose yaiitwa yekutora pfungwa dzevanhu nekudaro kanzuru inofanira kukoshesa zvakabva muvanhu yodzikisa zvikamu izvi kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mitero zvakanaka.